Dhagayso: Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadashay Muslimiintii lagu xasuuqey New Zealand. – Shabakadda Amiirnuur
March 17, 2019 4:54 am by admin Views: 82
Sheekh Cali ayaa ugu horeyn wuxuu tacsi u diray guud ahaan dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu gumaaday weeraradii lagu qaaday labada Masjid ee ku yaalay magaalada ChristChurch ee wadanka New Zealand, wuxuuna Allaah uga baryay “inuu ka aqbalo intii ku shahiiday, una boog dhayo kuwa dhaawaca ah”.
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo soo daliishanaya nusuus sharci ah ayaa Muslimiinta ku booriyay iney sabraan, islamarkaana ixtisaabsadaan, isagoona sheegay in Mujaahidiintu ay la xanuunsanayaan ehellada ay dadkooda ku dhinteen weerarkaas wuxuushnimada ahaa.
“Dhacdadaas foosha xun ee ka dhacday New Zealand waxay markale daaha ka rogeysaa colaada gaamurtay ee ay gaaladu u qabaan Muslimiinta, waxay marag ma doonto u tahay xiqdiga saliibiga ah ee kuwaas falkaas geystay iyo kuwa kale ee gadaal ka taagan ay u hayaan dadka muslimiinta ah” ayuu yiri Sheekh Cali dheere Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Muslimiinta ku nool wadamada Reer galbeedka ayuu Sheekh Cali dheere ugu baaqay iney fahmaan waaqica ka jira caalamka, ayna wax ku dhistaan, isagoona ku waaniyay inaaney ku kedsoomin hadallada ay jeediyaan madaxda iyo siyaasiyiinta Reer-galbeedka ee ku aadan wada noolaansha iyo xurriyada diimaha.